Guddoomiyaha gobolka oo xariga jaray Dugsi laga hirgeliyay degmada C/casiis – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka oo xariga jaray Dugsi laga hirgeliyay degmada C/casiis
Iskuulka Hoose iyo Dhexe degmada C/casiis ee maqaalada Muqdisho oo ka kooban 12 Fasal Isla markaana loogu talagalay in si lacag la’aan ah wax loogu barayo Carruurta ku nool degmadaasi,waxaa maanta xariga Ka jiray guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa maqaalada Muqdisho kadib markii la soo gebe gebeeyay dayactir lagu dhismaha Iskuulka oo ay dib u dhiskiisa iska kaashideen maamulka gobalka Banaadir iyo Hay’adda DRC.
Intaas kadib guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa maqaalada Muqdsiho ayaa mid mid u kormeeray Fasalada uu ka kooban yahay Dugsiga Hoose iyo dhexe ee degmada C/casiis Xiligaas oo ay Fasalada Xaadir ku ahaan arday aad u fara badan kuwaas oo diyaar u ah in ay wax ku bartaan Iskuulkan.
Cismaan Muxiyadiin Cali Cariif oo ah guddoomiyaha Degmada C/casiis ee gobalka Banaadir ayaa sheegay in Dugsigan laga hergaliyay degmada C/casiis uu dbooli i doono Inta badan baahida dhanka Waxbarshada oo ka jirta guud ahaan degmada Cabdi Caziiz ee gobolka Banaadir.
Mudane Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa maqaalada Muqdisho oo meel fagaare ah kula hadley boqolal arday oo Wax ka baran doonta Iskuulkan ayaa sheegay in mashruucan lagu dhisey Dugsiga Hoose iyo dhexe degmada C/casiis uu yahay Mashruucii 8aad oo ay bishan Maamulka gobalka Banaadir ka fuliyo degmooyinka gobolka Banaadir.
“Dhismaha Dugsigan waxaa uu qey ka yahay mashaariicda kala duwan oo ka socoda degmooyinka gobolka, waxaana dhismahan hergeliyay maamulka degmada oo kaashanaya hay’adda DRC oo laga leeyaha dalka Denmark” ayuu yir guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Gudomiyaha gobalka Banaadir ahna Duqa maqaalada Muqdisho ayaa Wasaaradda Waxbarashada ka codsaday Dugsigan laga hergeliyay degmada C/casiis ay keenaan macalimiintii wax ka dhigi laheyd Iskuulkan.
Madaxweynaha J. F. S. oo saaka dalka dib ugu soo laabtay